दैनिक ५० देखि ६० किलोमिटर दौडिरहेको छु - AahaSanchar
Home आहा टक दैनिक ५० देखि ६० किलोमिटर दौडिरहेको छु
नाम : दुर्गाराज बुढा
ठेगाना : मुसिकोट नगरपालिका ६, सेरीगाउँ रुकुम
उमेर : २८
आजभोली कता ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
बिभिन्न किसिमका साहासिक दौडको तयारीमा र कहिले हिमाल कहिले पहाड अनी कहिले तराईका बिभिन्न ठाउँमा दैनिक ५०/५५ किलोमिटर दौडेर बिश्वको साहसिक खेलकुलहरुको दौडमा प्रतिस्प्रर्धाका लागि तयारी गरिरहेको छु
मेरो बाल्यकाल बिशेष गरेर सामान्यतया औपचारिक अध्ययन गर्दै खेलकुदमा रुची भएका हुनाले आमा बुवा गुरुले अध्ययनमा जोड दिदा पनि लुकिछिपि बिभिन्न किसिमका दौडहरुमा मैले केहि समय बिताउने गर्दथे ।
दौड खेल भन्नाले कसरी बुझ्ने ?
दौड भन्न्नाले मैले एउटा एथलेटिक्स अन्र्तगत पर्ने अत्यन्त सहज र मानब जीवनको लागि अति फाईदाजनक एउटा खेल हो । जुन अहिलेको भौतिक परिस्थतिमा नभई नहुने खेल हो । जुनमा बिभिन्न किसमका दौडहरु पर्दछन ।
मानब जीवनमा खेलकुदको महत्व कति छ ?
यो प्रश्न चाहि महत्वपुर्ण प्रश्न गर्नु भयो, मानब जीवनमा खेलको महत्व कुनै पनि शब्दमा बर्णन गर्न नसकिने जस्तो छ । आजको २१ औं सताब्दीमा एउटा बिशेषगरी छुट्नै नहुने एउटा चिज भएको खेल हो । खेलकुदले मानबले नसोचेको आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुका साथै आफ्नो राष्ट्रमा एउटा गौरबशाली सार्थक कर्म गरेर राष्ट्रलाई चिनाउने सहास र शक्ति बोकेको हुन्छ ।
तपाईले अहिले सम्म कति वटा प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो ?
मैले अहिले सम्म ५ वटा अन्र्तराष्ट्रिय, २ वटा खुल्ला राष्ट्रिय र अन्य दर्जनौं प्रतियोगितामा भाग लिनुका साथै जिल्ला र क्षेत्रिय प्रतियोगीतामा चार पटक बिजेता बने । यसबाट मैले पटक पटक साहासिक दौडबाट बिश्व बिजेता बन्ने शक्ति र बिश्वास प्राप्त गरेको छु । जुन मेरो जीवनको लागि एउटा महत्वपुर्ण क्षण हुनका साथै आफ्नो जन्मभुमि र आमा बुवाको आर्शिबादले पक्कै पनि यस खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रलाई चिनाउने सक्ने बिश्वास पैदा भएको छ ।
दौड क्षेत्रमा अल्ट्रा दौड भन्ने गरिन्छ नी, त्यसलाई सरल भाषामा कसरी बुझ्ने ?
अल्ट्रादौड भनेको एउटा पर्यटन विकासको लागि अत्यन्त टेवा पु¥याउने साहासिक दौड हो । यो दौड हिमाल र पहाडमा हुने गर्दछ । दुरी चाँहि ८० किलोमिटर भन्दा माथी पहाड र हिमालका सुन्दर दृष्यहरुलाई नजिकैबाट नियालेर दौडनुको उत्साह र माजा बेग्लै हुने गर्दछ ।
यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि सत्रिय भैरहदा कस्तो हौसला पाईराख्नु भएको छ ?
बास्ताबमा हौसला भन्ने कुरा आफ्नो हृदयबाट नै आउनुपर्ने रहेछ । जुन यस्ता किसमका प्रतियोगीताहरुमा भाग लिदा मैले बिभिन्न किसमका आफ्ठेरा बाधाहरु आईपरे । तिनीहरुलाई पनि व्यवस्था गर्दै आफ्नो रुची र अन्तरहृदयबाट प्राप्त भएका कुराहरु कहिलेपनि त्याग्न सकिदो रहेनछ । त्यसैले गर्दा मैले जस्तो सुकै पस्थितिमा पनि यस दौड खेललाई जीवनमा पुरा गरेरै छाड्ने जमर्को गरे । त्यसपछि मैले अहिले सम्म पनि आफ्नै लगानि र मेहेनतमा यी प्रतियोगितामा भाग लिईराखेको छु । त्यसैले मेरो जीवनमा यस दौडलाई सफल पार्न ठुलो चुनौति सामना गर्नु पर्नेछ ।
अन्त्यमा, अबको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ ?
बिभिन्न समयमा हुने अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगीताको लागि दैनिक ५० देखि ६० किलोमिटर पहाड र हिमाल दौडिरहेको छु । प्रस्तुती ः सुबास बटला
Previous articleबांगेलाखुरी देखि चौरजहारी सडक खण्डको बिबाद मिल्यो
Next articleकस्ले जित्ला अवार्ड, कुलमान देखि बिनोद सम्म प्रतिस्पर्धामा
आहा संचार संबाददाता कार्यशाला, फोटो
यात्रा : ह्याँती गर्ने कुरा
aahasanchar - November 24, 2018
aahasanchar - August 23, 2018